» CID-da Soomaaliya oo Handadaad Joogta ah Ku Heysa Suxufiyiinta Muqdisho Thursday, April 17th, 2014
CID-da Soomaaliya oo Handadaad Joogta ah Ku Heysa Suxufiyiinta Muqdisho
Jan 12, 2013 - jawaab	Aqrisatay:3561Laanta Dambi Baarista Soomaaliya, CID, ayaa handadaad si joogta ah ugu haysa suxufiyiinta ka hawlgala magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa ka hadla xadgudubyada ka dhaca gudaha Muqdisho ee loo geysto dadka rayidka ah ee aan tabarta lahayn.
CID waxay xirtay wariye ka hawlgalayay magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Cabdicasiis Cabdinuur, January 10, 2013 ka dib markii uu wareysi la yeeshay gabar ka tirsan barakacayaasha gudaha dalka oo ay ciidamo ka tirsan dowladda ay si isdaba joog ah u kufsadeen.
Wariyeyaal ku sugan magaalada Muqdisho oo aan Facebook ku wadahadalnay ayaa ii xaqiijiyay xarigga wariyaha.
Wariyeyaasha aan la sheekeystay waxay ii sheegeen in CID-du ay u yeertay wariye Cabdicasiis, ka dibna ay gudaha dhigeen.
Xarigga wariyahan waxa uu daba socdaa falal ay ku kacday laanta dambi baaristu oo ka dhan ah wariyeyaasha, falalkaasoo isugu jira xarig iyo su’aalo weydiin.
Kufsiga lagu hayo haweenka barakacayaasha kuma koobna keliya gabadha ku dhiiratay inay warbaahinta la hadasho, hase yeeshee waxaa si joogta ah falalka kufsiga ah ay uga dhacaan xeryaha dadka barakacayaasha, kuwaasoo ay geystaan ciidamada dowladda iyagoo awoodda dhanka sugidda amniga ee ay haystaan ku gabanaya.
Shabakadda Englishka ee telefishanka Aljazeera ayaa dhowaan baahisay warbixin ku saabsan haweenay ay kufsadeen ciidamada dowladda. Laakiin lama oga in xarigga wariyahan uu la xiriiro warbixintaasi uu baahiyay Telefishanka Aljazeera.
Wariyeyaasha ku sugan Muqdisho waxay sheegeen in tan iyo markii warbixintaasi la baahiyay CID-du ay ku raad joogtay halka laga helay xogta warbixinta kufsiga, iyagoo u yeeray wariye Cumar Faaruuq, oo ka tirsan Aljazeera, kaasoo ay su’aalo ka weydiiyeen warbixintaasi.
Wariyaha Aljazeera ayaa la sii daayay ka dib markii uu sheegay inuusan waxba ku lahayn warbixinta ay daabacday Aljazeera English.
Si kastaba ha ahaatee, Xarunta CID-da ayaa u muuqata inay isku dayayso inay handado oo ay aamusiso wariyeyaasha, si aanay xaqiiqada uga hadlin, iyadoo xarigan ugu dambeeyay uu macnihiisu yahay goodin toos ah amma cagajugleyn inaanu wariyena ku dhici Karin inuu ka hadlo fal dambiyeedyada ay geystaan ciidamada dowladda.
Ugu dambeyntii CID-da wxaa la gudboon inay raadiso ciidamadii xadgudubka geystay, halkii ay ka xiri lahayd wariyihii dambiga bannaanka soo dhigay.
Waxaa Daabacay Abdulkadir Nunow Horyaalmedia@live.com